Gawaari Sidday Sanaadiiqda Kaararka Codbixiyeyaasha ee Diiwaangelinta Gobolka Sool oo La Afduubtay – Goobjoog News
Gawaari Sidday Sanaadiiqda Kaararka Codbixiyeyaasha ee Diiwaangelinta Gobolka Sool oo La Afduubtay
Labo baabuur oo sanaaadiiqda diiwaangelinta cod bixiyeyaasha u siday deegaanka Hol-hol ee dhanka waqooyin kaga toosan magaalada Laascaanood ayaa xalay waxa deegaankaasi ku afduubtay rag hubaysan oo sida la sheeegay diiddan in diiwaangelintu ka dhacdo deegaankaasi .
Labadan gaari oo noocoodu ahaa Laankuruusar ayaa siday sheegayaan warbaahinta deegaankaasi, ayaa gawaadhidii iyo shaqaalihii la socday oo illaa Sideed qof lagu qiyaasay, laga leexsaday wadadii ay ku socdeen, iyagoo ku jiheysnaa dhanka bari ee magaalada Hol-hol, illaa iyo hadana lama oga meel ay ku sugan yihiin oo ay la tageen gawaaridii iyo sanaadiiqdii intaba.
Dadka deegaanka Hol-hol ayaa iyaguna si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan diiwaangelin oo uu ka taliyo maamulka Khaatumo. Iyadoo dadkani ay sheegeen inay samayn doonaan kacdoon ka dhan ah shaqada diiwaangelinta ee Somaliland ka waddo deegaanada gobolka Sool.
Wasiir ku xigeenka amniga ee maamulka Khaatumo Abshir Cabdicasiis ayaa todobaadkan dhexdiisa mar uu meel fagaare ah kala hadlaayey dadweyne taageersan Khaatumo u sheegay inay ka hortagi doonaan diiwaangelin laga qabto dhulka Khaatumo maamusho isaga oo ku sababeeyey inaanay jirin wax heshiis rasmi ah oo ay kala sexeexdeen maamulada Khaatumo iyo Somaliland.
Warar hoose ayaa sheegaya iyaguna in guddiga doorashooyinka Somaliland qaybta Laascaanood ay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ku wargeliyeen labadaas baabuur ee la af duubay.
Bdeojn zxmobl Cialis online without prescription cialis savings card
Ansqgw aaqqul Brand viagra over the net how to get cialis
Skoxim gowvdo Buy cialis online online pharmacy
Ohqozc giibnf Brand viagra canadian pharmacy online
viagra single packs sildenafil generic...